शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !
आधाभन्दा बढी गाडी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका
काठमाडौं –शहरी विकास मन्त्रालयमा सरकारी सवारीसाधनको निकै दुरुपयोग भइरहेको पाइएको छ ।
मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले आफ्नो सचिवालयको प्रयोजनका लागि भनेर नै ३ वटा गाडी र एउटा स्कूटर लिएका छन्, जसमा उनी स्वयंले चढ्ने बा २ झ ३८४२ नम्बरको गाडी तथा उनका सवारी चालक र पीएसओले चढ्ने मोटरसाइकल समावेश छैन ।
स्वकीय सचिवालयका नाममा दुईवटा गाडी छन् । बा २ झ ३६३८ र बा २ झ ३०९२ नम्बरको गाडी स्वकीय सचिवालयले प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ । यति मात्र होइन, स्वकीय सचिवालयका लागि नै भनेर बा २ ब २३३६ नम्बरको स्कूटर पनि लिइएको छ ।
यद्यपि मन्त्री राईका स्वकीय सचिव शमशुल हक राई भने स्वकीय सचिवालयसँग ३६३८ नम्बरको गाडी मात्र रहेको दाबी गर्छन् । उनले त्यसो भने पनि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा स्वकीय सचिवालयका लागि भनेर २ वटा गाडी र एउटा स्कूटर लिएको देखिन्छ ।
मन्त्रीका निजी सचिवले बा २ झ ९७० नम्बरको गाडी प्रयोग गर्ने गरेको विवरणमा उल्लेख छ । उक्त गाडी शाखा अधिकृत वैकुण्ठ उपाध्यायले प्रयोग गर्दै आएका छन् । हामीलाई प्राप्त विवरणमा निजी सचिव मात्र उल्लेख भए पनि उनको नाम, प्रत्यक्ष फोन सम्पर्क र पद मन्त्रालयको वेबसाइटबाट लिइएको हो ।
मन्त्रालयमा उपसचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले चारपांग्रे सवारी सुविधा पाएको देखिँदैन । यसरी हेर्दा मन्त्रीकै निजी सचिवको हैसियतमा उनले गाडी प्रयोग गर्ने गरेका हुन् ।
सचिवलाई बिहान–बेलुका र दिउँसो बेग्लाबेग्लै गाडी !
सचिव रमेशप्रसाद सिंहले दुईवटा गाडी प्रयोग गर्छन् । बा १ झ ९४४९ नम्बरको गाडी सचिवले आफ्नै नाममा लिएका छन् भने बा २ झ २९८३ नम्बरको गाडी सचिवालयका लागि भनेर लिइएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, दुवै गाडी सचिव सिंहले प्रयोग गर्दै आएका छन् । ‘एउटा गाडी दिउँसो चढ्नुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अर्को एउटा बिहान–बेलुका प्रयोग गर्ने गर्नुभएको छ ।’
दुवै गाडीका लागि उनले मासिक सय/सय लिटर इन्धन लिन्छन् ।
मन्त्रालयमा प्रयोग हुँदै आएका १७ वटा गाडीमध्ये ९ वटा गाडी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले उपलब्ध गराएको देखिन्छ । मन्त्री, सचिव, सहसचिव, मन्त्रीको सचिवालयले प्रयोग गरेका सबै गाडी विभागले उपलब्ध गराएका हुन् ।
हेर्नुहोस्, चारपांग्रे सवारीको विवरण:
मन्त्रीलाई २ सय ७ लिटर र दुईपांग्रे सवारीलाई १० लिटर इन्धन
मन्त्री राईले मासिक २ सय ७ लिटर इन्धन लिँदै आएका छन् । यस्तै सचिवका दुवै गाडीलाई प्रतिगाडी १०० लिटर, स्वकीय सचिवालयको नामका दुई गाडीलाई ८०/८० र निजी सचिवले प्रयोग गर्ने गाडीका लागि ७० लिटर इन्धन मन्त्रालयले मासिक उपलब्ध गराउँदै आएको देखिन्छ ।
उपसचिव सहित अन्यले चढ्ने गाडीलाई मासिक ७० लिटर र दुईपांग्रे सवारीसाधनका लागि १० लिटर इन्धन मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
अधिकृत, इन्जिनीयरदेखि सहायकसम्मलाई दुईपांग्रे
शाखा अधिकृत, इन्जिनीयरदेखि कार्यलय सहायकसम्मका ४३ जनाले मोटरसाइकल तथा स्कूटर प्रयोग गर्दै आएका छन् । दुईपांग्रे सवारीका प्रयोगकर्ताले मासिक १० लिटरका दरले इन्धन लिँदै आएको देखिन्छ ।
पाँच थान मोटरसाइकल बिग्रिएर थन्किए
मन्त्रालयमा ५ थान मोटरसाइकल बिग्रिएर थन्किएका छन् । ती मोटरसाइकल सीटीईभीटीका प्रशिक्षार्थीको प्रयोजनार्थ हस्तान्तरणको प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पढ्नुहोस्, यस श्रृंखलामा प्रकाशित अन्य समाचार :
भाग - १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]
प्रतिनिधिसभा विघटनमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिँदैन
कोरोना महामारीकै समयमा लुम्बिनीका सांसदले बुझे ३...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कसको ? आइतबार हुँदै छिनोफानो
पृतनापति समन्वयात्मक बैठक सकियो
चीनको ग्रेटवालको झल्को दिने पर्खाल नेपालमा (तस्बिर)
गुँरास फूल्यो बनैभरी....
नेता श्रीमानलाई हात मिलाएर श्रीमतीको स्वागत
राजधानीमा धार्मिक गतिविधिका लागि पदयात्रा